Fantaro i Mangu Purty, mpampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 17 – 23 Septambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2019 7:46 GMT
Sary natolotr'i Mangu Purty
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Mangu Purty (@ManguPurty) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Mpianatra amin'ny taona voalohany, mianatra ny teny Shinoa aho. Amin'ny 2020 aho no tokony hahazo ny diplaomako. Avy any amin'ny ilany atsimon'i Jharkhand, izay faritra iray mampiasa ny fiteny Ho .
Amin'izao fotoana izao, ny fiteny Ho dia hita ety anaty tambajotra fotsiny amin'ny endrika fifampiresahana tsy manara-penitra sy lahatsarin-kira. Ireo fitaovana rehetra azo raisina dia saika amin'ny endritsotratra mampiasa ny fiteny Latina / Devanagari / Odia avokoa. Hafa ankoatra izany, tsy misy tahiry voasoratra mba azo raisina momba ireo lohahevitra isankarazany , toy ny fiarahamonina, ny siansa sy ny kolontsaina. Amin'ny ampahany, dia vokatry ny tsy fisian'ireo endritsoratra fampiasa amin'ny solosaina sy ny fitaovana ahafahana mampiditra azy ireny. Mba ho tsapa ety anaty tambajotra ny fisiany, mbola mila ezaka ny Warang Chiti, endritsoratra ampiasaina amin'ny Ho. Ary koa, misy ny tsy fahampian'ny fampahatsiarovantena momba ny fampiasàna ny Warang Chiti ety anaty tambajotra.
Fa eny ivelan'ny aterineto, tsaratsara kokoa ny toedraharaha, na tsy mahafapo aza. Ampianarina any amin'ny Oniversite-n'i Jharkhand ny Ho. Fa ny tena zavadehibe indrindra dia ny sekoly fanabeazana fototra, izay vitsy dia vitsy ireo sekoly no manana mpampianatra ny fiteny Ho . Amin'ny maha-teny tenenina voalohany azy, tsy ireo teraka tao anatiny ihany, fa mavomavoin'ireo teratany tsy nateraka hiteny azy ny Ho. Zavamisy mampahalahelo ny hoe ireo olona manana ny ampy ara-bola no matetika manome lamosina azy sy mikisika mankany amin'ny fitenanana ny Hindi, izay heverina ho toy ny fiteny manome tombony raha miohatra amin'ny Ho. Nefa misy firehetampo be ihany eny anivon'ireo tanora Ho mba hitahirizany ny tenin'izy ireo sy ny kolontsainy. Nisy maro ireo famoriambahoaka sy hetsipanoherana natao tato anatin'ny taona vitsy lasa mba hitakiana ny haneken'ny governemanta indiàna ny fiteny Ho..
• ny tetikasa Ho Wikipedia.
• Famoronana endritsoratra Unicode mifanaraka amin'ny Warang Chiti .
• Fomba fampidirana ny Warang Chiti.
• Fampivoarana ny rakibolana teknika.
• Tantara fohy momba ny endritsoratra sy ny fanekena azy eny anivon'ireo mpiteny ny Ho.
• Fikatrohana ho an'ny teny
• ny fivoarana efa vitra hatreto.
Ny tena hery manosika ny ezaka ataoko dia ny fitiavako ny fiteniko mba hitovy amin'ireo fiteny hafa rehetra hitako manerana ny tany. Antenaiko mba ho hita eny anatin'ireo sehatra nomerika ny Ho. Misy mihoatra ny iray tapitrisa ireo mpiteny Ho, tsy afaka ny hanjavona fotsiny amin'izao ilay fiteny, tsy maintsy ataontsika fotsiny izay ezaka tandrify.